Ireo Libaney Mpitoraka Bilaogy (Herinandron’ny 26 Martsa 2006): Tsy Be Resaka Politika, Zavatra Maromaro Kokoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2017 13:14 GMT
Nahitana karazana lahatsoratra maro samihafa sy mahaliana tao amin'ny Tontolon'ny Bilaogy Libaney tamin'ity herinandro ity. Toa nahakivy ireo Libaney mpitoraka bilaogy ny iray volana nandinihana ny fifanakalozan-kevitra nasionaly mahamonamonaina sy mandiso fanantenana ka nampiala azy ireo hankany amin'ny zavatra manintonintona kokoa.
Voalohany, manome antsika ny anisan'ny antony mahatonga ireo Libaney mpitoraka bilaogy leo sy reraka amin'ireo resaka politika i Desmond avy ao amin'ny A View From A Bar Stool In Beirut:
Hitako tsy niraika tamin'ny lohatenim-baovao na noheverina ho tantaram-baovao intsony aho – mety hoe satria tsy misy zavatra tena mitranga akory na mahatsapa ho nahilikiliky ny lenta Olaimpikan'ny tsy fihontsonana ataon'ny sarangan'ny mpitondra ny fanjakana ara-drarintsika.
Topimasonà fahakiviana iray hafa avy any Doha ao amin'ny The Lebanese Bloggers:
Manontany tena aho hoe inona àry no ataon'ireo mpanao politika rehetra ireo izay mivory impiry-polo manodidina ny latabatra boribory lazaina ho fifanakalozan-kevitra nasionaly, amin'ny fiainany. Tena marina? Efa nanontany tena mikasika izany fanontaniana izany ve isika? Manana fotoana be dia be izy ireo, fotoana betsaka be, mba handaminana fivoriana aorian'ny fivoriana iray hafa, izay tsy misy vokatra azo tsapain-tànana akory.
Tsy mahagaga raha samy mijery any an-toeran-kafa ny rehetra hitady zavatra “mahafinaritra” kokoa. Jereo i Jamal ao amin'ny Jamal’s Propaganda Site (Vohikala Fampielezan-kevitr'i Jamal). Manoratra mikasika ny fisainana amboadia sy toetra misavoamboanan'ireo Libaney mpamily fiarakaretsaka izy:
Nitaingina niaraka tamin'ilay tompondakan'ny tononkalo tsy voaomana ao amin'ny “Almumayazoun” aho, indray mandeha nahazo mpamily resin-tory eo am-pamiliana. Mazava ho azy, misy ny ady tsy tapaka amin'ny hoe aiza ny toerana ihintsanana. Aoka koa ho vonona mandrakariva amin'ny mpamily tsy tapa-kevitra izay mampiditra anao ary avy eo miova hevitra eny antenantenan-dàlana ary miteny anao tsotra izao fotsiny mba hivoaka.
Miresaka ny fitiavana Libaney ihany koa i Jamal ho lohateny ao anatinà lahatsoratra iray hafa.
Tena tsy laitra mihitsy tamin'ity herinandro ity i Lebanon.Profile avy ao amin'ny The Lebanese Political Journal (Ny Gazety Ara-politika Libaney). Nosoratany ny mikasika ny tokony hikarakarana kokoa ny Zavakanto sy ny Haikanton'ny Jiosy Libaney. Nanoratra lahatsoratra roa samihafa ihany koa izy momba ireo Pelaka sy ireo olana amin'ny media Libaney.
Samy mitrandraka ny fiteny i Letters Apart sy Ur Shalim. Ny voalohany variana amin'ny fomba filaza nampiasaina tao amin'ny taratasy nosoratan'ny Filoha Assad ao Syria ho an'ny Berri Voalohany ao Libanona. Mieritreritra ity farany fa ireo endri-tsoratra ampiasaina amin'ny fandefasana hafatra amin'ny finday mba handikàna ny teny Arabo ho teny Anglisy dia manampy hahatanteraka ny nofinofy elan'ilay Libaney iray poeta hafahafa.
Mustapha avy ao amin'ny The Beirut Spring (ny mpanoratrareo) indray manoratra lahatsoratra iray ao amin'ny The Economist, momba ny tsy fahampian'ny famakiana avy any Brezila, ary mieritreritra hoe fantany ny antony: noho ny fisian'ny Libaney maro any.
Mandritra izany, Kais avy ao amin'ny Beirut To The Beltway dia mbola mifantoka amin'ny politika ihany. Tao anatin'ny lahatsoratra iray maneso, lazainy amintsika ny antony ieritreretany fa tsy tokony hanana ny fantsona fahitalavitra mandeha Zanabolana ho azy manokana i Michel Aoun, lehiben'ny mpanohitra